Momba anay - Shijiazhuang Tidy Fashion Trading Co., Ltd.
Akanjo rotsakorana-jasmanina PVC
Akanjo-Rainco-Eva Peva Raincoat
Akanjo-Rainana-Pvc / Polyester Raincoat
Shijiazhuang Tidy Fashion Trading Co., Ltd.dia naorina tamin'ny 2011. Ny tompona manana traikefa ara-barotra vahiny mihoatra ny roa-polo taona sy ny toeram-pamokarana ho antsika, dia manamboatra sy mamokatra vokatra isan-karazany izahay amin'izao fotoana izao ho an'ny mpanjifa manerantany. ny tsenantsika lehibe dia misy an'i Eropa, Amerika avaratra sy atsimo, afrika ary azia.
Amin'izao fotoana izao, ny zavatra lehibe indrindra dia ny fitafiana miasa, akanjo lava, vokatra ivelany, vokatra ao an-trano, vokatra fampiroboroboana ary zavatra plastika. Izahay dia manolotra ireto vokatra ireto amin'ny safidy isan-karazany amin'ny habe, naoty, loko ary fomba. Azo antoka fa afaka mahita zavatra mifanaraka amin'ny zavatra ilainao ianao. Ankoatr'izay, mandray am-pitandremana fifehezana kalitao izahay. Manamarina ny vokatra mandritra ny tsingerin'ny famokarana, manome toky anao izahay fa tsy manome afa-tsy ny entana avo lenta indrindra.
Rehefa mivelatra amin'ny tsena bebe kokoa ny orinasanay dia mitady mpiara-miasa vaovao izahay. Azafady mba mifandraisa aminay izao miaraka amin'ny fifaneraserana amin'ny antsipiriany. Ny fangatahana rehetra dia hankasitrahana indrindra.
Shijiazhuang Tidy Fashion Co., Ltd. dia mpanondrana akanjo ana orana sy mpanao asa tanana matihanina. Any avaratr'i Sina, akaikin'ny beijing. Izahay dia iray amin'ireo orinasa mpamokatra entana any avaratr'i Sina ho an'ny karazan'akanjo rehetra, akanjo ivelany, zavatra Baby ary zavatra plastika hafa
Manana ozinina plastika manokana izahay eto an-tanànantsika. Mampiasa mpiasa 200 mahery, 30 amin'ireo mpiasa ireo dia tompon'andraikitra amin'ny fitarihana teknika (td), fifehezana kalitao (qc) ary ny fizotran'ny fitantanana. Na dia samy manana traikefa 20 taona farafahakeliny aza ireo mpikambana ao amin'ny TD, ny ekipan'ny QC dia manam-pahaizana ihany koa amin'ny fandaminana ny famokarana sy ny fandaharam-potoana fandefasana entana. Tsy vitan'ny hoe nanangona traikefa an-tsena iraisam-pirenena manankarena izahay, fa nahazo ny lazan'ireo mpanjifa ihany koa noho ny fieritreretanay ny asa.
Ny vokatra dia manarona: PVC, PEVA, EVA, PE, Pvc / Polyester / Pvc, fitafiana nilona 100% nylon, Nylon (Taffeta / Oxford / Ripstop), 100% Polyester (Taffeta / Micro / Twill), Cotton 100%, akanjo fiasana T / C, akorandriaka malefaka palitao, sns. manana tombony tanteraka amin'ny vidiny, kalitao ary ora fanaterana izahay. Ity no tombony manokana tsy manam-paharoa sy lehibe ho antsika.
No.151 Zhongshan andrefana lalana, Shijiazhuang, Sina